ဒီနေ့ကတော့ ဘလော့ဒေးဆိုပြီး ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။
ဒါကြောင့် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်အောင် ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတော့ ဘလော့ ကို ပြန်ပြီး အသက်သွင်းရမလား မသိပါဘူး။
ယူနီကုတ်နဲ့ ဇော်ဂျီလည်း ပြောင်းရပါဦးမယ် . . . .
ငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်သော နေ့သစ်များကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ . . . .
ဒီေန႔ကေတာ့ ဘေလာ့ေဒးဆိုၿပီး က်င္းပေလ့ရွိတဲ့ေန႔ပါပဲ။
ဒါေၾကာင့္ မွတ္မွတ္ရရ ျဖစ္ေအာင္ ပို႔စ္တင္လိုက္ပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းေတာ့ ဘေလာ့ ကို ျပန္ၿပီး အသက္သြင္းရမလား မသိပါဘူး။
ယူနီကုတ္နဲ႔ ေဇာ္ဂ်ီလည္း ေျပာင္းရပါဦးမယ္ . . . .
ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ေန႔သစ္မ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ . . . .
Posted by U Hteik အခ်ိန္ 10:42 PM No comments:
ဩဂုတ်လ ၃၁ ရက် က ဘလော့ဒေးအဖြစ် သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်ကြပါတယ်။
အခုတော့ အင်တာနက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတော့ ဘလော့ထက် website တွေကို ပိုပြီး လုပ်ရတာလွယ်လာပါတယ်။
နောက် CMS တွေ က ပိုပြီး အဆင်ပြေလာတော့ အဲဒီဘက် ပို လုပ်လာကြတယ်။
ဘာဖြစ်ဖြစ် မြန်မာအင်တာနက်သမိုင်းမှာတော့ ဘလော့ခေတ်က တစ်ခေတ် ဖြစ်ခဲ့သေးတာပါပဲ။
၂၀၀၆- ၂၀၀၇- ၂၀၀၈ နေ့ရက်များကို လွမ်းရင်း
ဘလော့ဒေး အမှတ်တရ ရေးလိုက်ရပါတယ်။
၂၀၂၀ပြည့်နှစ် ဩဂုတ်လ ၃၁ရက် ဘလော့ဒေး
Posted by U Hteik အခ်ိန္ 3:39 PM No comments:
Posted by U Hteik အခ်ိန္ 5:00 PM 1 comment:
Posted by U Hteik အခ်ိန္ 2:42 PM No comments:
Posted by U Hteik အခ်ိန္ 2:19 PM No comments:
ဘလော့မရေးတာကြာပါပြီ. . . ဘလော့ပြန်ပွင့်တာကို . . . ဂုဏ်ပြုလျက် . . ပြန်ရေးဖြစ်တဲ့နေ့ . . .၂၉-၈-၂၀၁၁
ဒီနေ့ကတော့ ဘလော့ဒေးဆိုပြီး ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့နေ့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် မှတ်မှတ်ရရ ဖြစ်အောင် ပို့စ်တင်လိုက်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ဘလော့ ကို ပြန်ပြီး အသ...